हिमाल उक्लदै सडकहरु… – News Book Online
हिमाल उक्लदै सडकहरु…
जेष्ठ १०, २०७८ १३:०३ प्रकाशित
ब्लग, मुख्य खबर
हेर्दा राम्रो घान्द्रुके गाउँ छ,बस्ने भए मायालु दिलमा ठाउँ छ…
घान्द्रुक पुग्नु अगावै तिलक बम मल्लको स्वरमा रहेको यो गीत मनमनै गुञ्जिन्छ । तर मल्लले अहिले घान्द्रुक नियालेको भए निराशा हुन्थे होलान् । गीतले न्याय पाउने थिएन कि ? समय फेरियो, सँगै फेरियो घान्द्रुकको रुप । विकास उक्लियो, सँगै विकासको नाममा विनाश । घान्द्रुकमा मौलिकता खोज्नेहरु त्यहाँ पुग्दा निराशा बन्न सक्छन् । ढुंगेनी गाउँको उपमा पाएको घान्द्रुकले के आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सकिरहेको छ त ? आधुनिकताको नाममा मौलिकता कतिको संरक्षित छ त ? हरेक पल्ट घान्द्रुक पुग्दा यी यावत प्रश्नका मनमनै गम्न थाल्छु । अनि भेट्छु त केवल निराशा अनि खिन्नता ।
घान्द्रुक । नेपालकै एक ग्रामीण पर्यटकीय गन्तव्य । ‘नेपाल चियाउनु छ भने जीवनमा एकपल्ट घान्द्रुक पुग्नै पर्छ,’ उहिलेका बुढापाकाहरुले घान्द्रुकको प्रशंसा गर्दै यस्तो भन्थे । हुन पनि घान्द्रुकको आँगनबाटै देखिने लोभलाग्दो हिमचुली र अन्नपूर्ण साउथ जति हेरेपनि कहाँ धीत मर्छ र ? ढुंगेनी गाउँ अनि पृष्ठभूमिमा हिमाल, यहीँ फोटो नै काफी थियो संसारको मन जित्न । त्यसैले त सात समुद्र पारिका अन्जान मानिसहरु यहाँ आउँथे । पहिला पर्यटक उक्लन्थे हिमालतिर, अहिले सडक उक्लिरहेका छन् हतारमा । त्यो फोटोमा अहिले पहाड खोस्रेर बनेको सडकले खल्लो अनुभूति दिलाउँछ । विकास उक्लेको भन्छन् नि मान्छेहरु । यहीँ होला क्यार ! हुन पनि नेपालीका लागि विकास भनेकै घरघरमा पुग्ने डोजरले खनेको बाटो न हो ।
सन् १९५० जुन ३ तारिखमा फ्रान्सेली नागरिक मौरिस हर्जोग र उनको टोली अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहण गरेका थिए । यसपछि न हो, अन्नपूर्ण क्षेत्र संसारले चिनेको । यसको करिब डेढ दशकपछि सन् १९६६ मा विश्वप्रसिद्ध पदयात्री एरिक सिप्टनले अन्नपूर्ण आधार शिविरको पदयात्रा गरेका थिए । अनि त पदयात्रीको लर्को नै लाग्यो आधार शिविरसम्म । विश्वका हरेक कुनाबाट यो अनकन्टार भेडी गोठतिर सबैको ध्यान खिचियो । एकपल्ट हैन, दोहोर्‍याइ, तेहर्‍याइ आउनेहरु धेरै छन् ।
अन्नपूर्ण पदयात्रा । कुनै बेला विश्वकै नामी पदयात्रा थियो यो । जीवनमा पुग्नै पर्ने लिस्टमा राख्थे विदेशीहरु । एक फेरो अन्नपूर्णलाई फन्को मार्न महिना दिनको क्याम्पिङ ट्रेक गर्नुपथ्यो । अहिले त महिनौै दिन खुम्चिएर हप्ता दिनमा झरेको छ । बेर छैन, कुनै दिन ‘अन्नपूर्ण फेरो पजेरोमा’ भनेर विज्ञापन बजाउन, एजेन्सीहरुले । जहाँ जहाँ पदयात्रीहरु पुगे, त्यहाँ त्यहाँ सडक पुगेका छन् अहिले । पदयात्रीले पर्यटन उकास्यो, सडकले पर्यटन नमज्जाले खस्कायो । डोजर आतंकले हैरान छ जहीँतहीँ । युवाहरु विदेश भासिदै छन् । पदमार्गहरु मासिँदै छन् । स–साना गोरेटो अनि घोडेटोहरु फराकिला सडक बने । तर साँघुरियो घुम्नेहरुको मन पनि । गाडीको धुँवा अनि धुलो खादै पदयात्रा गर्नुको के मज्जा ?
कुरा गरौं, अन्नपूर्ण सेन्चुरी कै । काडें, लान्द्रुक, घान्द्रुक हुँदै आधार शिविरसम्म दुई हप्ताको क्याम्पिक ट्रेक हुन्थ्यो एक दशक अघि । यता नयाँपुलबाट सुरु हुने पदयात्रा बिरेठाटी हुँदै घान्द्रुकमा पहिलो दिनको थकान मारिन्थ्यो । लोभलाग्दा धानका फाँटहरु, अनि मोदीको चिसो सिरेटो, आँतै हर्ने खालको । अनि बाटामा भेटिन्थे हँसिला गाउँलेहरु । खुलेर बोल्थे गाउँलेहरु हिमालझैं । ढुंगाले छापेका चिटिक्क परेका सिढींहरु उस्तै बिछट्टै लोभलाग्दा । पसिना चुहाउँदै हिमचुली नियाल्दै घान्द्रुक पुग्नुको आनन्दै बेग्लै हुन्थ्यो ।
आजकल सुनसान छन् सिढींहरु । झारपातहरुले अधिपत्य जमाइसकेको छ । अनि सुनसान छन् गाउँहरु । प्राय टि सपहरुमा भोटे ताल्चा लागेको वर्षौ भइसक्यो । सडक उक्लिएसँगै यहाँको पर्यटन सुक्यो । मोदी सुसाउँछन् नि नाइँ, मान्छेहरुले बिर्सिसके । खच्चर र घोडाको लाम आजकल गाडीले विस्तापित गरिदिएको छ । गाडीको कर्कस आवाज अगाडि मोदीको सुसेली दबिएको आभाष हुन्छ । बोल्दो हो त, कति गुनासोँ पोख्दो हो, मोदीले । तर फुर्सद कसलाई पो छ र ? सबैलाई हतार छ, दुई घण्टा मै घान्द्रुक पुग्न । उस्तै परे, त्यही दिन पोखरा फर्कन ।
दिनभरको हिडाइपछि घान्द्रुक पुग्दा झोलासँगै थकान बिसाउँदा बिछट्टै आनन्द मिल्थ्यो । अनि थकान बिर्साउने रोदीको नाँच । अहिले न रोदी छ न त घाँटु नाँच नै । यता गुरुङ संस्कृति अनि परम्परा झल्कने सामानहरु खुम्चिएर संग्रहालयमा सीमित छ । सडक उक्लियो, सडकसँगै बोराको चामल अनि बोइलर कुखुरा उक्लिए गाउँमा । न अर्गानिक स्वाद बाँकी रह्यो न अर्गानिक स्वागत नै । विदेशी ओइरिएपछि नेपालीलाई के गन्दा हुन् ? कोठा छैनन् नेपालीका लागि, अन्तै होटल जानुस्, यहीँ नै हो धेरैले भोगेको तितो यर्थाथ ।
हरेक वर्ष सडक विस्तार हिमालतिर लम्किदै छ । छिट्टै छोम्रोङ पुग्नेछ सडक । अनि त अर्को दशकमा आधार शिविरसम्म सडक नपुग्ला भन्न सकिँदैन । विकासका पूर्वाधारहरु हरेक कुनाकन्दरा पुर्‍याउनुपर्छ । सडक पुर्‍याउनुपर्छ अनि बिजुली र बत्ती पनि । तर विकासका नाममा विनाश गर्न पनि त भएन नि ।
जुन जगमा उभिएर यस क्षेत्रमा आर्थिक प्रगतिहरु भित्रिए, आज त्यसैलाई लत्याएर भावी सपनाहरु बुन्दै छन् । ढुंगाले छापेका पदमार्गका छपनीहरु उप्काइए, चौतारा र कुवाहरुको नाम निशान छैन । विदेशीहरु सुसेल्दै उक्लने उकालाहरुमा अहिले मेसिन गुड्दै छन् । कहाँको उहिलेको घोडा र खच्चरको घाँटीको घण्टी धुन अनि कहाँ अहिलेको गाडीको कर्कस आवाज । यसरी त यहाँको पर्यटनको भविष्य त्यति उज्यालो देखिँदैन ।
समयमै वैकल्पिक पदमार्गहरु खोजिनुपर्छ । सडक गाउँगाउँ पुग्नुपर्छ तर पदमार्गलाई विनाश पुर्‍याउनु हुँदैन । एक्याप र स्थानीय सरकारको समयमै ध्यान जाओस् । नत्र त यहाँको भविष्यको पर्यटन अन्धकार बन्न सक्छ । सबैलाई चेतना भया !